विश्व अर्थतन्त्रमा ‘यू–टर्न’, पाँच दशकयताकै बढी वृद्धि सम्भव छ ? - लुम्बिनी सञ्चार लुम्बिनी सञ्चार
विश्व अर्थतन्त्रमा ‘यू–टर्न’, पाँच दशकयताकै बढी वृद्धि सम्भव छ ?
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १२:१८
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले भनेको छ, “यस वर्ष सन् २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशतले बढ्ने छ ।” कोभिड–१९ विरुद्ध खोपका लागि धनी मुलुकहरूले सरकारी सहायतामा व्यापक खर्च गरेका कारण पनि यस वर्ष तीव्र आर्थिक विकास हुने बैंकको अनुमान छ । यदि प्रक्षेपण गरिए जसरी यो वर्ष आर्थिक वृद्धि भएमा विगत पाँच दशक यताकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको मानिने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुसार यस वर्ष अर्थात सन् २०२१ मा विश्वको अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ९१.९८ ट्रिलियन पुग्नेछ । सन २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ८४.५४ ट्रिलियन पुगेको थियो । कोभिडको महामारीका कारण यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र सन २०१९ को तुलनामा ३.५ प्रतिशत ऋणात्मक हुन पुगेको थियो ।
आईएमएफका अनुसार, सन् २०२१ मा जिडिपीका आधारमा सबैभन्दा धेरै संयूक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र २०४ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर रहने छ भने उदाउँदै गरेको चीनको अर्थतन्त्र १३४ खर्ब पुग्ने छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी र चिनियाँ अर्थतन्त्रको निकै चर्चा हुने गर्दछ । आईएमएफले जापानको अर्थतन्त्र ४.९७ ट्रिलियन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, जर्मनीको अर्थतन्त्र ४ र संयुक्त अधिराज्य बेलायतको अर्थतन्त्र २.८३ ट्रिलियन पुग्ने छ । सन् २०२१ मा फ्रान्सको अर्थतन्त्र २.७८ र भारतीय अर्थतन्त्र २.७२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ ।
यसरी नै, इटलीको २.०७, ब्राजिलको १.८७ र क्यानडाको १.७१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने आईएमएफको अनुमान छ । विश्व बैंकले गत जनवरीमा यस वर्ष अर्थात् २०२१ मा ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । वर्षको मध्यतिर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यलाई अद्यावधिक गर्दै उसले विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएको हो । यद्यपि प्रक्षेपण गरिएजस्तो वृद्धिदर विकासशील मुलुकका लागि परिस्थिति सहज नहुने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ ।
चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण संसारले मानवीयसँगै आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । अति–विकसित मुलुकहरूमा खोपलाई प्राथमिकता दिइए पनि कोरोनाका नयाँ–नयाँ भेरियन्टको त्रास भने अझै हटेको छैन ।
यद्यपि कोभिडका कारण ठप्प भएको अर्थतन्त्र भने बिस्तारै चलायमान हुन सुरु भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै विश्व बैंकले आफ्नो परिदृश्य अध्यावधिक गरेको हो । बैकका अनुसार गत वर्ष विश्वको अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।
गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले व्यापारमा पु-याएको अवरोध, व्यवसाय बन्द र मानिसलाई घरभित्रै बस्न बाध्य पारेका कारण आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको थियो । बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण सन् १९७३ पछि सबैभन्दा बढी हो । सन् १९७३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ६.६ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२१ को आर्थिक वृद्धिदर विश्वका सबैजसो मुलुक एवं क्षेत्रमा समान किसिमको भने हुने छैन । गत वर्षको सुुरुवाततिर विश्व बैकले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महामारीबाट पिल्सिएको अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रेट डिप्रेसन’को संज्ञा दिएको थियो तर त्यसको करिब एक वर्षपछि अति–विकसित, विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान मात्रै भएको छैन, यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ‘भी–सेप’को पुनःबहालीको बाटोमा गएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कम विकसित र अल्प–विकसित मुलुकहरू महामारीबाट बाहिर आउन अझै केही समय लाग्नेछ । विशेषगरी विकसित मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन, कोरिया, भारत लगायतका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन करदाताले बुझाएको ठूलो राजस्व रकम आर्थिक पुनर्उत्थानमा खर्च गरेका छन् ।
“त्यही कारण पनि ठूला अर्थतन्त्र भएका ९० प्रतिशत मुलुकले अर्को वर्षभित्रै कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा आफ्ना मुलुकलाई पु¥याउने सम्भावना छ,” उसले भनेको छ । यस्तो परिस्थिति विकासशील कम विकसित मुलुकका लागि त्यति सहज नहुने भन्दै उसले न्यून आय भएका मुलुकहरूलाई व्यापक स्तरमा खोप सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोगलाई निरन्तरता बनाउन धनी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ । यी मुलुकहरूमा खोप अभियान पनि सुस्त छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशतले बढ्ने
विश्व बैंकले सन् २०२१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । गत जनवरीमा यस वर्षको अमेरिकी अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले उक्त अनुमानमा संशोधन गर्दै यस वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दोब्बर वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
कोभिडका कारण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकाको आर्थिक बृद्धिदर गत वर्ष सन २०२० मा ३.५ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको थियो । तर, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा अमेरिकी कम्पनीहरूले सफलता पाएसँगै अहिले खोप वितरण तीव्र गतिमा भइरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जसले गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र उकालो लागेको छ भने पचासै वटा राज्यमा पहिला जारी गरिएका कतिपय प्रतिबन्धहरूलाई समेत फुकुवा गरिएको छ ।
चीनले अमेरिकालाई उछिन्ला ?
विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ८.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । कोरोना भाइरसलाई चाँडै नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र खुला गरेको चीनको गत वर्ष पनि अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।
चीनको नेसनल ब्यूरो अफ स्टाटिस्टिक्स नामक प्रतिवेदनअनुसार २०२० को मध्यसम्म बाँकी विश्व लकडाउनमा रहेको अप्रिल, मे र जुनमा चिनियाँ अर्थतन्त्र आकासिएको उल्लेख छ ।
सन २०२० को पहिलो तीन महिनामा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ६.८ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । बेलायती अनुसन्धान संस्था ‘सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजनेस रिसर्च’ ले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२८ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को व्यावसायिक व्यवस्थापनले चीनको प्रगति अमेरिका र युरोपमा भन्दा छिटो हुने उल्लेख छ, जसमा भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०३० मा विश्वकै तेस्रो ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । आईएमएफका अनुसार सन् २०२० मा धनी राष्ट्रको सूचीमा भारत सातौँ स्थानमा छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको पहिलो, दोस्रो, हुँदै तेस्रो भेरियन्टको सामना गरिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुनेछ । कोभिडसँग लडन भारतले ल्याएको राहत प्याकेज र खोपलाई प्राथमिकता दिइएसँगै संकुचनमा आएको भारतीय अर्थतन्त्र धिमा गतीमा उकालो लाग्दैछ ।
आर्थिक थिंक ट्यांक ‘नेसनल काउन्सिल अफ एप्लाईड रिसर्च’ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३.३ प्रतिशतले संकुचन आएको भारतीय अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ४.४१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । विश्व बैकले पनि खोप प्रभावकारी भएमा भारतीय अर्थतन्त्र बिस्तारै उकालो लाग्ने र सन २०२२ सम्म भारी मात्रामा सुधार हुने बताएको छ ।
यूरोपेली अर्थतन्त्र सामान्य
युरो मुद्रा प्रयोग गर्ने युरोपका १९ वटा मुलुकको अर्थतन्त्र ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । गत वर्ष यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा ६.६ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । जापानको अर्थतन्त्र गत वर्ष ४.७ प्रतिशतले गिरावट आए पनि यस वर्ष २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लयमा फर्किदै बेलायती अर्थतन्त्र
आईएमएफले पनि चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा बिश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुने अनुमान गरेको छ । आईएमएफका अनुसार बेलायती अर्थतन्त्र सन २०२२ को अन्त्यसम्म कोभिड १९ महामारी भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने छ । युरोपका अधिकांश मुलुकले खोपलाई तीव्र बनाएका कारण युरोपेली अर्थतन्त्रले गति लिने बताइएको छ । बेलायत हालसालै यूरोपियन यूनियनबाट अलग भएको राष्ट्र हो ।
जो बाइडनको ६० खर्बको बजेट १० खर्बको राहतले फेरिदै अमेरिकी अर्थतन्त्र
गत मेको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ६० खर्ब डलर खर्च योजनासहित आफ्नो पहिलो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरे । उनको यो बजेटले कोरोना भाइरसको महामारीले संकुचनमा आएको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनमात्रै सघाएन, चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दोब्बर हुने संकेत देखाएको छ ।
जो बाइडनको योजनामा कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अर्थतन्त्र जोगाउन अमेरिकामा १० खर्ब डलरको राहतको प्याकेज ल्याइएको छ, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो राहत प्याकेज भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ । अमेरिकी पत्रिका वासिंटन पोस्टका अनुसार वाइडनको पहिलो बजेटमा पुँजीपती वर्गले तिर्नुपर्ने करको दर निकै बढाइएको छ भने गरिब अर्थात न्यून आम्दानी हुनेरूका लागि विभिन्न खाले राहत र छुटका कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
अर्को त्यस्तो एउटा ठूलो प्रस्तावमा ठूला सामाजिक कार्यक्रमहरू र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लगानी गरिने पनि उल्लेख छ । बाइडनले अमेरिकी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्रममा सावधानी र सुझबुझपूर्ण उपायका साथ योजना सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएका छन् ।
वाइडनको उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिकाको ऋणभार सन् २०३१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ११७ प्रतिशत पुग्नेछ । यो बिन्दु दोस्रो विश्वयुद्धताकाको भन्दा पनि बढी भएको बताइन्छ ।
रिपब्लिकन पार्टीका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प पदमा रहँदा पनि बर्सेनि ऋणभार बढेको थियो । उनको अन्तिम वार्षिक खर्च प्रस्ताव ४८ खर्ब डलरको रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम सीएनएनले जनाएको छ । बाइडनको बजेटमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र अन्य सरकारी निकायका लागि १५ खर्ब डलर चालू खर्च समाविष्ट गरिएको छ ।
बजेटमा यसअघि उनले चर्चा गर्ने गरेका २३ खर्ब डलरको रोजगारी योजना तथा १८ खर्ब डलरको परिवारसम्बन्धी योजना समेटिएका छन् । डेमाक्र्याटिक राष्ट्रपति बाइडनले आफ्नो बजेटले अमेरिकी नागरिकमा सीधै लगानी गरिने हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न एवं दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थालाई सुधार्न सघाउ पुग्ने बताएका छन्, जसबाट कोरोना भाइरसको महामारीबाट पिल्सिएको अर्थतन्त्रलाई तल्लो तहबाटै उकास्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाइडन प्रशासनले ल्याएको ६० खर्ब डलरको परियोजनाबाट करिब ८ खर्ब डलर बढी जलवायु परिबर्तनको लडाईमा एवं स्वच्छ ऊर्जामा खर्चिने उल्लेख छ । जलवायु परिजर्तनको मुद्दा यतिबेला संसारभर पेचिलो बनेको छ ।
यस्तै बाइडनले २ खर्ब डलर रकम तीन र चार वर्षका बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रि–स्कूलका लागि खर्च गरिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् भने १ खर्ब ९ अर्ब डलर रकम अमेरिकाको लागि दुई वर्षे निःशुल्क सामुदायिक कलेजका लागि खर्च गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
यस्तै, २२५ अर्ब डलर परिवारहरूलाई भत्ता दिने एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम र चिकित्सकीय बिदासम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसले अमेरिकालाई तुलनात्मक रुपमा समृद्ध राष्ट्रको तहमा ल्याउन कोशेढुंगा साबित हुने बाइडन प्रशासनको अपेक्षा छ ।
बाइडनले ११५ अर्ब डलर सडक र पुलहरूका लागि एवं १६० अर्ब डलर सार्वजनिक यातायात र रेलसेवामा खर्च गरिने योजना बुनेका छन्, जसले सार्वजनिक यातायत र रेलसेवा अझै प्रभावकारी बन्दै जाने र जनतालाई सहज यातायात सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यस्तै, १०० अर्ब बढी रकम हरेक अमेरिकी घरधुरीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच सुधार गर्न खर्च गरिने योजना अघि सारिएको छ ।
अहिले अमेरिकाको आर्थिक अवस्था थप मजबुत भएको भन्दै वाइडेन प्रशासनको प्रशंसा गरिएको छ । वाइडेन प्रशासनले आपतकालीन युद्धसँग जुधे जसरी राज्य संयन्त्रका हरेक समूहलाई विश्वासमा लिएर यथेष्ट बजेट समेत निकासा दिन सफल भएको चर्चा गर्न शुरु भएको छ ।
खोप लगाउनेलाई १०० डलर
अमेरिकामा अहिलेसम्म आधा जनसंख्याले मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् । विश्वकै अति–विकसित, सचेत, सुविधा सम्पन्न र शक्तिशाली मानिने मुलुकमा नै अहिलेसम्म ५० प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका हुन् । अमेरिका कोभिड महामारीको संक्रमण दर र मृत्यु हुनेको दर सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक हो । अमेरिकाले नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका साथै आर्थिक र मानवीय विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ ।
यद्यपि खोपको प्रयाप्त उपलब्धता हुँदा हुँदै पनि अपेक्षित रूपमा धेरै मानिसले खोप नलगाएपछि अमेरिकी सरकारले खोप लगाउन देशवासीलाई पटकपटक विशेष अनुरोध गर्दै आएको छ । खोप लगाउनेको संख्या बढाउन अमेरिकी सरकारले विभिन्न प्याकेज समेत ल्याएको छ । अमेरिकी सरकारले केही दिन अगाडि खोप लगाउनेलाई १०० डलर दिने घोषणा समेत गरेको छ ।
लक्ष्य भेटाउन १५ लाख डलरको पुरस्कार
अहिले अमेरिकी राज्य सरकारहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि पुरस्कारको समेत घोषणा गरेका छन् । न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, मेरील्यान्ड लगायतका राज्यहरूले आफ्नो लक्ष्य भेटाउन पुरस्कारको घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य र जनसंख्यामा समेत पहिलो राज्यको रुपमा रहेको क्यालिफोर्नियाले १५ लाख डलरको पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । उक्त राज्यमा ३ करोड ९५ लाख ३८ हजार २२३ जनसंख्या छ ।
२५ सय भन्दा तल झर्यो सेयर बजार
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तद्वारा लाभांश, घोषणा बोनस सेयर मात्रै कति ?
‘ओमिक्रोन संक्रमण भएकालाई कुनै लक्षण छैन,कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगमा परेका ६६ जनाको…
नेपालमा पनि कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटियो
भारतमा ओमिक्रोनका २१ संक्रमित भेटिए
रोल्पामा नेतृत्वको ‘ग्रुमिङ’ गर्दै एमाले
रोल्पामा मोबाइल नेटवर्क समस्याबारे सभापति घर्तीद्वारा छलफल,सेवा सुधार्न
यस वर्ष रोल्पाका १४ वटा खोलामा पक्की पुल
प्यूठान स्वर्गद्वारीको महिमा चुलिँदा महाप्रभुको जन्मस्थल रोल्पाको रुन्टी